Ny tantaram-pianakavian'i Bernd Leno momba ny tantaram-pahaterahana malaza tsy fantatra
Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Alemanina Ny tantaram-pianakavian'i Bernd Leno momba ny tantaram-pahaterahana malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra izay fantatra amin'ny anaram-bosotra "Penalty Killer". Ny tantaranay momba ny tantaram-behivavy Bernd Leno sy ny tantaram-piainan'ny tantaram-pitiavana dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-niseho mahatalanjona avy amin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-piaramanidina tany am-boalohany, ny lalana mankany amin'ny laza, ny fiantsoana ny tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana.
Eny, fantatry ny rehetra fa iray amin'ireo mpiandry tsato-bidy indrindra eran-tany izy. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Bernd Leno izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Mombamomba ny mpanoratra Bernd Leno Bernd Leno Mamisoa @ Ny fiainan'ny taloha sy ny fianakaviana
Bernd Leno dia teraka tamin'ny 4 March 1992 tamin'ny ray aman-dreniny; Rosa Leno sy rainy, Viktor Leno Bietigheim-Bissingen, Alemaina. Ny fianakavian'i Bernd Leno dia avy amin'ny fiteny alemana-Rosiana, noho ny dadany izay dika alemà, antsasaky ny Rosiana.
Leno dia nihalehibe niaraka tamin'ny rahalahiny tao amin'ny tanàna kelin'i Bietigheim-Bissingen any atsimon'i Alemana izay akaiky an'i Stuttgart. Ireo izay mahafantatra an'i Leno amin'ny maha-zaza azy dia nahita azy ho tovolahy tena mahery. Ireo hery toy izany dia notarihina ho fanatanjahan-tena. Raha niresaka momba ny fanatanjahantena dia samy tia baolina avokoa ny mpikambana rehetra ao amin'ny fianakaviana Bernd Leno. Tahaka ny nametrahan'i Leno izany;
"Tena zava-dehibe ho an'ny fianakaviako ny baolina kitra, ho an'ny rahalahiko sy ho ahy ny fiainanay. Tianay hilalao lalao baolina kitra foana ny baolina kitra. Amin'izay fotoana izay, ny kilalao rehetra dia baolina kitra. "
Tany am-piandohana nandritra ny andro fialan-tsasatra, i Leno dia nandeha nilalao lalao teo an-toerana, indrindra tamin'ny "toerana ratsy" izay tsy nanan-danja taminy satria niaraka tamin'ny namana izy. Tamin'ny taona 6, nanapa-kevitra ny handray baolina amin'ny baolina kitra izy amin'ny alàlan'ny fananganana asa.
Mombamomba ny mpanoratra Bernd Leno Bernd Leno Mamisoa @ Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Niditra tao amin'ny lisitry ny ekipa tanora SV Germania Bietigheim i Leno izay nanome azy sehatra handaminana ny asany. Nanomboka nanosika ny ekipa miditra izy hatramin'ny fotoana nidinany tamin'ilay klioba. Ny fanapahan-kevitr'i Leno ho lasa matihanina dia tsy vitan'ny hoe fantany fotsiny. Ny fanapahan-kevitra toy izany dia nitarika azy hanandrana fitsapana amin'ny akademika lehibe kokoa.
Tamin'ny taona 11 dia nangataka i Leno mba hiara-hiasa amin'ny ekipa tanora ao amin'ny VfB Stuttgart ary nofidiana mba hanatrika fitsapana. Nanatevin-daharana ny tanora mpilalao 200 izay nomena lisitra izy mba hanatrika fitsapana am-pilaminana.
Soa ihany, Leno anisan'ny mpilalao 6 izay nofinidin'ny VfB Stuttgart taorian'ny fandresen'izy ireo ny mpanazatra. Mbola nitohy hatramin'izao i Leno ho mpilalao midiademy.
Mombamomba ny mpanoratra Bernd Leno Bernd Leno Mamisoa @ Road to Fame
Ahoana no nahatonga azy ho miaramila: Amin'ny maha-mpilalao baolina zandriny tanora azy, Leno dia maro no nihazakazaka niverina mba hiarovana ny ambadika ary na ny mpiambina ny ankamaroany aza. Izany dia nataony mandra-pahatongan'ny 10 taona taloha talohan'ny nahatonga azy ho lasa mpiambina. Ao amin'ny tafatafa iray Arsenal FC, Nitantara indray i Leno. Ao amin'ny teniny;
"Indray andro dia tsy tonga tamin'ny lalao iray ny mpitandro filaminana tao amin'ny klioban'ny tanàna misy anao, ka nanontany ilay mpanazatra hoe iza no te ho mpiambina.
Hoy aho tamin'izy ireo, 'te hanandrana' aho. Niezaka aho ary nahita fa tena tsara daholo ny rehetra. Avy eo dia nividy fonon-tanana maromaro ny ray aman-dreniko ary tsy te handao ny tanjona tanjona aho taorian'izany. "
Ny zava-bitan'i Leno dia ny nankafiziny ny asan'ny taranja taranja dia ny sampy, tsy olon-kafa raha oharina amin'ny mpanafika Arsenal, Jens Lehmann.
Na dia tanora aza i Leno, dia nitarika ny fitarihana tamin'ny sary espaniola sy teo aloha Real Madrid Iker Casillas. Tany Stuttgart Leno dia nihaona voalohany tamin'i Jens Lehmann izy izay nandray lesona lehibe avy amin'ny lesona. Niresaka momba izany izy indray mandeha Arsenal Press;
Nijery azy be dia be aho nandritra ny fotoam-pampianarana ary niarahany niofana niaraka taminy fony aho tamin'ny 16 na 17 taona. Nifantoka be izy, ary matihanina. Izany no toe-tsaina izay ilainao ho mpiambina mpiambina.
Ny mpanafika mpitantsoroka teo aloha, mbola nitoetra tao amin'ny VfB Stuttgart i Lehmann raha nanatontosa ny asany tamin'ny klioba i Leno. Nahita ny tenany ho mpandimby an'i Lehmann i Leno noho ny fandrotsahany ny zokiny amin'ny kliobany. Indrisy fa ho an'ireo mpankafy, nanapa-kevitra i Leno hanaiky ny ahitra maitso arakaraka ny roa taona miaraka amin'ny klioba izay toy izany dia nilalao tamin'ny fizarana fahatelo alemana. Nahazo ny tapakilan'ny Bundesliga niaraka tamin'i Bayer Leverkusen izy.
Mombamomba ny mpanoratra Bernd Leno Bernd Leno Mamisoa @ Mitsangàna mba ho ankizilahy
Ny fifindrana avy amin'ny fizarana fahatelo alemana manerana ny fizarana voalohany dia sarotra ary tamin'izany fotoana nahafinaritra ho an'i Bernd Leno izay 19 ihany tamin'io fotoana io. Sarotra ny nahatonga azy hanao ny laharam-boninahitry ny ekipany tamin'ny Chelsea taorian'ny telo herinandro nanaovana ny klioba. Nandritra ny lalao dia nanao fampisehoana mahagaga i Leno tamin'ny mpiloka ambony indrindra an'i Chelsea, Didier Drogba.
Tamin'ny resadresaka iray dia tsaroan'i Leno indray mandeha;
Taorian'ny lalao, Peter nilaza fa faly sy faly izy. Tsy nila nilaza ireo zavatra ireo izy fa nankasitraka izany. Fito taona lasa izay ary miaraka amin'ny Arsenal isika ankehitriny - adala izany!
Taorian'ny lalao Champions League, nanjary nanjary mazava tsara i Bayer Leverkusen nahita maherifo vaovao tao anaty fiarandalamby iray. Fantatrao ve?… Ny lalao ligin'ny Champions League dia nanome an'i Leno ny loka Eoropeana ho an'ireo tanora indrindra izay milalao ao amin'ny Ligy UEFA Champions League. Izy no 19 taona sy 193 andro.
Taorian'ny nandehanan'i Jens Lehmann dia lasa mpilalao tsy tapaka tao amin'ny ekipa voalohany i Leno rehefa avy nanao fampisehoana mahatalanjona. Niara-niasa tamin'i Bayer Leverkusen izy tamin'ny 2011 ka hatramin'ny 2018 nanao ny endrika 233. Nandeha tsara ny zava-drehetra nandritra ireo taona ireo mandra-pahatongan'ny iray ANDRO RATSY!!
Ny fanerenao hahazo azy: Fantatry ny rehetra fa manana herim-po goavambe i Leno. Saingy tsy nisy olona nahalala izay nitranga taminy tamin'io andro ratsy io tamin'ny 2015 tamin'ny volana Oktobra rehefa nanao ny ratsy indrindra tamin'ny federasiona nandritra ny vanim-potoana i Bundesliga. Amin'ny lalao Bundesliga miaraka amin'i Augsburg, I Leno dia nifototra tamin'ny làlan-dàlana tsy mendrika hiverina Jonathan Tah any aoriana any amin'ny haratony. Jereo ny horonantsary etsy ambany;
Niresaka fatratra taorian'ny namelezan'ny tenin'ireo mpankafy izy, hoy i Leno;
"Ho mpandresy ianao, ianao dia basy. Miara-misakafo an-tsokosoko ianao, manafatra azy manokana. Miady ho an'ny toerana tokana ianao ary raha manao fahadisoana lehibe iray ianao dia haingana ianao. "
Tamin'ity fotoana ity, mazava ho azy fa mazava ny andro farany nataon'i Leno tamin'ny klioban'ny namany alemana. Ny zavatra rehetra nataony dia ny fiandrasana ny fotoana hivoahana. Soa ihany, tamin'ny 19th of June, 2018, klioba anglisy Arsenal nahazo ny asany. Izany no nahafahan'i Leno fahafahana nihaona tamin'i Petr Čech namany namany taloha.
Araka ny tokony ho izy, Leno no nitifitra ny lozam-piaramanidina handresy ny mpiambina hafa iray tao Arsenal. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Mombamomba ny mpanoratra Bernd Leno Bernd Leno Mamisoa @ Relationship Life
I Bernd Leno dia niaraka tamin'i Sophie Christin nanomboka ny 15 2015 tamin'ny volana Aogositra, izay ny daty hankalazan'izy ireo ny tsingerintaona nahaterahany.
Sophie izay taranaka Alemana sy Tseky dia teraka tamin'ny andro 17T of February 1997 (5 Taona marary noho ny lehilahy) ao Dusseldorf, Alemaina. Mpianatra momba ny varotra izy ary mandany fotoana amin'ny famolavolana fotoana. Samy nahita ireo toerana roa ireo ny ankamaroan'ny mpankafy satria nankafy vakansy.
Na dia miara-miasa ela be aza ny ray aman-dreny, dia tsy nanomana drafitra momba ny fampakaram-badiny ireo tia roa. Na izany aza, fotoana fohy monja mialoha ny fampakarana ny fampakaram-bady ho an'ny roa.
Mombamomba ny mpanoratra Bernd Leno Bernd Leno Mamisoa @ Fiainana manokana
Ny hahafantaranao ny fiainan'i Bernd Leno ankoatra ny tanjon'ilay tanjona dia hanampy anao hahazo sary feno momba azy.
Manomboka amin'ny finoana izy io, Katolika Romanina. Nanao ezaka i Leno mba hitsidika ny Basilica St. Peter, Vatikana any Roma mba hananany izay "fotoana manokana" niarahana tamin'i Papa Francis.
Tena mpilalao FIFA: Raha mbola niara-niasa taminy ny ekipan'i Arsenal Hector Bellerin ary Rob Holding dia milalao lalao tifitra; Call of Duty, tahaka an'i Bernd Leno Juan Foyth te hifanaraka amin'ny FIFA.
Ny fanajan'i Leno an'i Casillas dia hita taratra tamin'ny safidiny ekipa tao amin'ny andiam-balala FIFA. Niresaka momba izany izy, indray mandeha dia niteny ...
"Niriko foana ny nilalao tamin'ny Real Madrid tao amin'ny PlayStation" hoy izy. "Antony lehibe ho an'izany i Casillas".
Mombamomba ny mpanoratra Bernd Leno Bernd Leno Mamisoa @ Zavatra tsy dia lehibe loatra
Ahoana no nahazoany ny anarany? "Penalty Killer ": Na dia Leno dia nianatra an'i Jens Lehmann sy i Leno Iker Casillas, saingy tena afaka mampianatra an'izany tanjona roa izany izy ireo. Izany no hetsika "famonoana sazy" izay nanome azy anarany manokana.
Fantatrao ve?… Tambinteny talohaLeverkusen, mpikarakara ny ganagana indray no nanakana ny sazy mihantona izay nijanona sazy sazy valo tamin'ireo valo tao an-dàlam-pànana federaly iray tao 2013 / 14. Izy no namonjy efatra in-telo. Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, tsy nisy mpitifitra velively (mazoto miasa sy misotro ronono) no nandresy ity rakitsoratra maneran-tany ity.
fiaretana: Manana fiaretana maro i Leno, tsy toy ny ankamaroan'ny andro maoderina. Indray mandeha izy no nitazona ny làlan-dry zareo tamin'ny orona nipoaka ary tsy natahotra ny hitaky ny mpanohitra azy amin'ny fombany handray ny baolina amin'izy ireo.
Izany dia nitranga tamin'ny lalao ligin'ny Champions 16 farany Diego Simeone's Atletico Madrid.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Bernd Leno momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Freddie Ljungberg Childhood Tantara Untold Biography Facts
Torohevitra momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba an'i Child
Tantaran'i Donyell Malen Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Reiss Nelson Tantara momba ny fahazazana plus Untold Biography Facts
Tantara momba ny fahazazan-jaza nataon'i Joe Willock sy Untold Biography Facts
Ny tantaram-pianakavian'i Petr Cech momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Laurent Koscielny tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pahaterahana tsy hita isa
Alex Iwobi tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bolo mbola tsy fantatra
Olivier Giroud Tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Joel Campbell tantaran'ny tantaram-pahaterahana ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Ny tantaran'i Ian Wright Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana